LANCOME ကအသစ်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ Hydrating Skin Tint! | CosmeticMyanmar
Home » Article » LANCOME ကအသစ်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ Hydrating Skin Tint!
LANCOME ကအသစ်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ Hydrating Skin Tint!
မိတ်ကပ်ထူထူကြီးလိမ်းခြယ်ရတာမျိုးကို မနှစ်သက်တဲ့ပျိုမေတွေ နှစ်သက်မယ့် Product အမျိုးအစားလေးကို LANCOME ကမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။ ဒီ Product ဟာ Skin tint ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် မိတ်ကပ်လိမ်းထားတာမျိုးမဖြစ်စေပဲ သဘာဝအတိုင်းကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ အသားအရေမျိုးကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။ အပြစ်အနာအဆာတွေကို ဖုံးအုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အပြင် SPF 23 ပါဝင်တာကြောင့် အရမ်းအသုံးတည့်မယ့် Product လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Product ကို အဆီနဲ့ ပါဝင်ဖော်စပ်ထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် အဆီပြန်တတ်တဲ့ အသားအရေပိုင်ဆိုင်သူတွေလည်း ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မျက်နှာကို သဘာဝအတိုင်းလှပနေတဲ့ ပုံစံမျိုးဖန်တီးပြီး Light-Weight ဖြစ်တာကြောင့် လိမ်းရတာ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေမှာ အမှန်ပါပဲ။ အသားရောင် အမျိုးမျိုး သင့်တော်စေရန်အတွက်လည်း Shades အားဖြင့် ၁၁ ရောင်ထုတ်လုပ်ထားပါသေးတယ်။ အသားအရေ စိုပြေလှပနေစေဖို့ရန်အတွက် Hyaluronic Acid ကို ပါဝင်ထည့်သွင်းဖော်စပ်ထားပြီး ရောင်ခြည်တွေကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက် Moringa Seed ရဲ့ အဆီအနှစ်တွေကိုလည်း ထည့်သွင်းဖော်စပ်ထားပါသေးတယ်။
အသုံးပြုတဲ့အခါ ကောင်းမွန်တဲ့ ရလဒ်ကို ရရှိစေဖို့ရန်အတွက် Primer တမျိုးမျိုး ကိုအရင်ဆုံးလိမ်းခြယ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ Skin Tint ပမာဏ အနည်းငယ်ကို ယူပြီး မျက်နှာအတွင်းပိုင်းမှ အပြင်ဖက်သို့ တဖြည်းဖြည်း လိမ်းခြယ်ပေးရပါမယ်။ အပြစ်အနာအဆာ တွေကို အသေးစိတ် သေချာဖုံးအုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် အပြစ်အနာအဆာရှိတဲ့ နေရာလေးတွေကို အစက်ချပြီး အနုစိတ်ဖုံးအုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် ၃၅ ဒေါ်လာဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူချင်သူတွေအနေနဲ့ Lancome Myanmar Store ဒါမှမဟုတ် USA Products Online Shop တွေမှာ မှာယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
Image Source : www.lancome-usa.com
ဈေးနှုန်းချိုသာပြီး Quality ကောင်းတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီလေးဆိုရင် PANTRA Beauty Lip Crayon လေး ရှိတယ်နော်!!!